Iko kusarudzwa kwakanyanya kwematsotsi ematsotsi
Ongororo dzematsotsi ematsotsi
Iyo Plot naJean Hanff Korelitz
Ugororo mukati megororo. Mune mamwe mazwi, ini handidi kutaura kuti Jean Hanff Korelitz aba kubva kuna Joel Dicker chikamu cherondedzero yake kubva kuna Harry Quebert uyo akabirawo moyo yedu chaizvo. Asi kusangana kwemusoro kune iyo yakanaka poindi yekusangana pakati pechokwadi ...
Iyo Alaska Sanders Affair naJoel Dicker
Zvishoma zvasara kuti tikwanise kunyudza isu muJoel Dicker nyowani. Uye kana izvozvo zvaitika ndinombomira kuti ndipe nhoroondo yezvandaverenga. Kubva pakutanga, Iyo Alaska Sanders Affair inoratidzwa kwatiri sekuteedzera. Asi isu tatoziva kuti Dicker anovashandisa sei vachidzokorora nyaya nyowani…
Panic naJames Ellroy
Zvinyorwa zvekugadzirisa biography kana chidimbu chendima kuburikidza nenyika yemunhu zvakare, zvirinani kupa nyaya yacho kumunyori wenhau pane kune ane mukurumbira munyori wenhoroondo. Uye hapana mumwe ari nani kupfuura James Ellroy kuti anyore izvo zvimedu zvehupenyu pakati pezvimwe zviedza nemimvuri mizhinji… About…
Mucheche, naPablo Rivero
Iyo nyaya yemasocial network uye magomba avo akafananidzirwa kubva pamaonero matsva. Nekuti hazvisi zvese zvinogona kuve gomba rakatenderedza masocial network. Muchokwadi, ndingade kuona nyika ino yazvino yedu yakavharirwa isina yakaipa whatsapp yekutaura nayo muboka kana ...
Kunhuwa Kwemhosva naKatarzyna Bonda
MuPoland nekukurudzira kwemudyi wenhaka kuhondo dzinopisa kana sendiro inotonhora mukutanga uye kubuda muHondo Yenyika Yechipiri, inzwi rakafanana neraKatarzyna Bonda (rinofananidzwa neredu. Dolores Redondo), inoputika zvakanyanya. Kusimba kunokatyamadza kweavo vanoshinga kubatanidza…
Tinotanga kumagumo, naChris Whitaker
Dzimwe nguva rudzi rutema runotora chirevo chinoganhurana nezviripo. Mhosva dzakaita seiya yaVíctor del Arbol, inokwanisa kudzika kwakadzikama kubva pakuona kwevatambi vake. Chimwe chinhu chakafanana chinoitika nemunyori uyu, Chris Whitacker anosvika neimwe poindi yekubatana pasina kupokana ne…
Zvakawanda Hazvina Kukwana, naMartín Casariego
Mushure memakore mashomanana ane mimvuri yakawanda kupfuura magetsi pakati peColombia, Mexico neIraq, Max akadzokera kuMadrid muna 2004. Mubhawa, guta uye chiyeuchidzo chaElsa chichawira paari, paanowana chivezwa cheBastet chakashongedza El Blue. katsi. Ikoko uchamuwana ...
Peji1 Peji2 ... Peji24 Zvadaro →